JINGHPAW KASA: ၀မ်ဘွမ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ နောက်ပိုင်းတိုင်းတပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း ဖားကန့်လမ်း စီအန်ရွာအနီး ၀မ်ဘွမ်တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင် (၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ အောက်တိုဘာ (၂၂) ရက် ညနေ (၇း၀၀) နာရီအချိန်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။ ကေအေအိုင်မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်သည် လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာ (၁၉) ရက်နေ့၌ စီအန် ကျေးရွာတွင် ရွာသူရွာသားများကို မတရားနှိပ်စက်ခဲ့သော စစ်တပ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ဤစစ်တပ်သည် ဂထန်ယန်ကျေးရွာတွင်လည်း ထင်ရာစိုင်းပြီး ရွာသူရွာသားများကို နှိပ်စက်ညှင်းပမ်း ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များသည် မဒဲန်ရွာသို့ ရောက်ရှိလာသောကြောင့် ဗမာစစ်တပ်၏ ရန်ကို ကြောက်ရွံ့သော ဂထန်ယန်ကျေးရွာနှင့် မဒဲန် ကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများသည် ဂေါ်ရီကျေးရွာ နှစ်ခြင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံနေရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
There wasabattle between patriotic KIA (6) battalion and Burmese Government troops in Wan Bum (Wan Hill), which is under KIA (2nd ) Brigade area, Western Kachin State, on 22th October 2012, according to the KIA front-line officer report. At 07:00 PM on that day, the Burmese troop, which it was the same group that they had tortured the innocent civilians from Si In village, invaded to KIA (6) battalion area of Wan Bum, it was near the Si In village that between the Mo Gawng and Hpakant road, thus KIA opened fired to prevent themselves. And this Burmese troops was again torturing Kahtan Yang villagers and now they are arriving in Ma Den village. Asaresult, the innocent civilians from Kahtang Yang and Ma Dang villages flee to Gauri Baptist church for the life security.
ကေအိုင်အေ ရဲဘော်သို့ ရယ် ...အပစ်မဲ့ပြည်သူကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေတော်တော် ခံစားနေရပြီ ကေအိုင်အေ အနေနဲ့သိပ်ငြိမ်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူးနော်...အဲဒီိနှိပ်ဆက်တဲ့ ဗမာတပ်ကိုမတ်သွားအောင်ဆံုးမစေချင်တယ်။
Tinangaamyu tinangashan hpe hkra wa jang gaw lu ai lak nak lang nna bai nhtang gasat ga.
Hkumhkrit mu law hktit yang lahkawng lang si ra ai anhte kaw garai nga ai garai kaw akyu hpyi ga anhteaawngpa dang lu sa na re law shakut ga anhte jinghpaw naw ni gaw mungdan lu na myu sha ni re KIA KIO ngu ai gaw myenmung hta ginjaw laiza myu nan nga ai majaw kaga myusha ni hte gaw nbung ai dapnawng daju nan nga ai majaw anhteagarai na lai ti gadai hpe mung nhkrit ra ai sai kaji ai myu ni nre ai jawgawng gawng ai myusha ni re tsawra wunpawng myu sha nieyawng matu garai shaman chyeju jaw u ga
I think they are testing and probing the strength, firepower, weapons, and manpower in that area for the big offensive they are planning.
သတင်းရေးတဲ့သူရေ အတင်းပြောချင်တာများလို့ စာလုံးတွေ မှားကုန်ပြီ ကေအိုင်အေ ကနေ ကေအေအိုင်ဖြစ်နေပြီ